प्रचण्ड, सरकार गठनको तीन महिनापछि फेरि आक्रामक, मन्त्रीलाई निस्काशन गर्नेसम्मको चेतावनी – ZoomNP
प्रचण्ड, सरकार गठनको तीन महिनापछि फेरि आक्रामक, मन्त्रीलाई निस्काशन गर्नेसम्मको चेतावनी प्रकाशित मिति: आइतवार, कार्तिक २१, २०७३ समय - ११:३७:२८ काठमाडौं कात्तीक २१ आफै सर्मथन गरेको केपि ओली नेतृत्वको सरकार ढलाए आफु प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सामु सरकार गठन नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती भयो । त्यसपछि आजको मितिसम्म प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना पुग्नुभन्दा अघिल्लो दिन शुक्रबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता निकै आक्रामक देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो आक्रामकता मुख्यतः चार ठाउँमा देखियो त्यस मध्ये पहिलोमा पर्यो आफ्नै सचिवालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार बिहानै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरुलाई भेला हुन भने । सचिवालका सदस्यहरु हतारिँदै जम्मा भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई कडा रुपमा सम्झाए ।
‘तपाईहरु सबैजना जनयुद्ध लडेरै आएका मान्छेलाई मैले सचिवालयमा राखेको छु, तर, आज तपाईहरुको काम गराई किन सुस्त भयो ? सरकारले गरेका कामहरुको जनतामा किन साम्रोसँग सन्देश प्रवाह भएन ?’
प्रधानमन्त्रीले निजी सचिवालयमा रहेका प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा, प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, जनसम्पर्क सल्लाहकार रामदीप आचार्य, स्वकीय सचिवहरु रमेश मल्ल, प्रकाश दाहाल लगायतलाई के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु भन्दै धम्काएका थिए ।
दोस्रोमा मन्त्रीहरुलाई हठात् बालुवाटारमा बोलावट, सचिवालयका सदस्यलाई कडा निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निवासमा तत्कालै माओवादी मन्त्रीहरुलाई हाजिर हुन भने । छोटो बोलावटमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेचाँहि बालुवाटार गएनन् ।
बाँकी मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाको वीचमा तपाईहरुले के के काम गर्नुभयो भनी प्रश्न गरे । तपाईहरुले काम नगरेको हो कि मैले जानकारी नपाएको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो पाराले काम नहुने चेतावनीसमेत दिए ।
मन्त्रीहरुलाई प्रधानमनत्रीले भने तपाईहरुको काम नगरेको कि मैले थाहा नपाएको मैले थाहा नपाएको भएपनि मिडियाले त थापा पाउनुपर्ने के हो ? भन्दै काम गर्ने शैली नमिलेको बताए । स्रोतका अनुसार सो जमघटमा केही मन्त्रीहरुले गरेको कामका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरेका थिए । जस्तो शिक्षा मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले सामान्यतः अरुले भन्दा राम्रो काम गरेको प्रधानमन्त्रीको निश्कर्ष थियो । तर, यी कामबारे मिडिया र जनतामा प्रचार हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरे ।
तेस्रो केपी ओलीसँग पनि ‘कडा’ कुरा, बिहान मन्त्रीहरुलाई कडा निर्देश्न दिएका प्रचण्डले शुक्रबार उसै दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बोलाए । दुई नेतावीच दिउँसो सिंहदरबारस्थित सभामुख ओनसरी घर्तीको च्याम्बरमा भेटवार्ता भयो ।
सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग सीधा सीधा कुरा गरे । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई मैले संविधान संशोधन र चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको छु, संविधान संशोधनमा यसो यसो गर्न लागेको छु, तपाईले सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । यसपछि केपी ओलीले टाउको हल्लाएर ठिकै छ भनको बताइएको छ ।
चाथो अब युद्धस्तरमा अघि बढ्ने दाबी, आफ्नो ९ महिने कार्यकालको अवधि छोटिँदै जाँदा अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युद्धको गतिमा अघि बढ्न लागेको यनको सचिवालयले दाबी गरेको छ ।
समाचार स्रोतले भन्यो ‘अब अलमल गर्ने र्फसद छैन, त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यू संविधान संशोधन गरेर स्थानीय निर्वाचन गराउने मिसनमा केन्द्रित हुनुभएको छ, राम्रो काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फेर्नेसमेत उहाँले चुतावनी दिनुभएको छ ।’
माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सचिवालय सदस्यका अनुसार जनताका पक्षमा काम नगर्ने र पदमा बसीरहने सपना नदेख्न प्रधानमन्त्रीले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिएको र रफ्तारमा काम गर्न निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ ।